Vehivavy Malagasy eto an-drenivohitra manara-maso ny trondro trondro Sary © Anne Furr / Marine Photobank
Ny faritra iray voafaritra eo an-toerana dia mety tsy mitovy amin'ny tanjona sy ny endrika hafa saingy misy lafiny anankiroa kosa dia tsy mifanaraka amin'izy ireo:
Ny LMMA dia samy hafa amin'ny fomba mahazatra MPA Ao anatin'izany faritra voaaro eo an-toerana izany no manamarika ny fananana eo an-toerana, ny fampiasana sy / na ny fitantanana, ary any amin'ny faritra sasany dia manaraka ny fomba amam-panao nentim-paharazana sy fitantanana ny faritra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny fehezan-teny MPA dia manondro ny faritra iray voatondro amin'ny fomba ofisialy, amin'ny fitantanana manatanteraka na manara-maso avy amin'ny maso ivoho iray.
Ny vondrom-piarahamonina matetika dia mametraka farafaharatsiny ho an'ny faritra iray voafaritra eo an-toerana ho toy ny tsy misy valiny (izany hoe ny LMMA dia afaka mampiasa ny MPA ho toy ny fitaovana iray ho an'ny fitantanana) na mametraka fisehoana, karazana, na famerana voatokana mba ahafahan'ny ala sy loharano miala amin'ny fanerena fanjono, na hanohana na hampitombo ny trondro.
Ao anatin'ny faritra iray voafaritra eo an-toerana, ny tanàna sasany dia mamelona indray ny fomba nentim-paharazana izay nampiasaina ho isan'ny kolontsaina ho an'ny taranaka maro. Ny hafa mampiasa hevitra maoderina nampidirina avy amin'ny loharano ivelany, ary ny vondrom-piarahamonina sasantsasany dia mampiasa marika roa.
Ny endriky ny fandraisana anjara amin'ny famolavolana sy fametrahana ny LMMA dia afaka mitaky fandraisana andraikitra lehibe sy fampiasam-bola ho an'ny olona sy vondrona eo an-toerana. Na izany aza, ny LMMAs dia mety ho iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanatanterahana ny valim-panatontosana maharitra sy mahomby. Noho izany antony izany dia mihamitombo hatrany izy ireo amin'ny fomba fitantanana ny faritra amin'ny fiarovana ny tontolo iaianana an-dranomasina sy ny fiarovana ny harena an-dranomasina.
Ireo mpitantana ny haran-dranomasin'ny Coral dia liana amin'ny fijerena ny feon'ny LMMAs dia handray soa avy amin'ny traikefa amin'ny programa LMMA misy:
The Ambanin'ny tambajotra an-drenivohitra dia vondron'ny mpitsabo mpandray anjara amin'ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana manerantany, manerana an'i Indo-Pasifika, izay miara-miasa mba hanatsarana ny ezaka fitantanana. Ny LMMA Network dia namolavola hitarika izay manome torolalana amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina ao an-toerana ary fametrahana LMMA.
The Ny faritra manodidina ny faritra avaratr'i Pasifika sy Protected (PIMPAC) dia fiaraha-miasa amin'ireo manampahefana eo anivon'ny vohikala, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, vondrom-piarahamonina ao an-toerana, federaly, fanjakana ary territorial agence, ary ireo mpiray antoka hafa miara-miasa mba hampitombo ny fampiasana sy ny fitantanana ireo faritra voaaro sy voaaro ao amin'ny nosin'i Pacific Islands sy Freely . Ny tanjon'ny PIMPAC dia ny manolotra fahafahana tsy tapaka ny fizarana vaovao, fahaizana, fampiharana ary traikefa amin'ny fampivelarana sy fanamafisana ny fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatra any amin'ny faritra afovoan'ny Pacific. Ny PIMPAC dia manome fanohanana ny ezaky ny fitantanana ny faritra eo amin'ny faritra, anisan'izany ny tany sy ny faritra voaaro ary voaaro, izay manohana ny fomba fitantanana manerantany amin'ny 'lalina mankany amin'ny vatohara'.
Ny tambajotran'ny faritra maridrefy (LMMA)
Ny faritra manodidina ny faritra avaratr'i Pasifika sy Protected (PIMPAC)
Fandaharam-pianarana: Fitantanana ny fiaraha-monina any Papouasie-Nouvelle-Guinée
Fandaharam-pianarana: Fitantanana ny fiaraha-monina any Tobago
Fandaharam-pianarana: Ny faritra voaangona ao an-toerana ao Yap